Who are they?: September 2008
ဖန်တီးသူ Kyaw Swa Linn
Head of Foreign Affairs Bureau.NLD (LA) Korea Branch
Posted by Who are They? at 3:29 AM0comments
ဆိုင်ကယ်မောင်မောင်ကဲ့သို့သော ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသည့် အထီးကျန်ဝိဥာဉ်များက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် လူသတ်စစ်အာဏာရှင်များ၏ အိပ်မက်များထဲကို ညစဉ်လည်ပတ်ရင်း ခြောက်လှန့်နေကြ သည်ဟု ဆိုလျင် မည်သူမျှ ငြင်းဆိုလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ။http://www.irrawaddy.org/bur/print/Articles2008/September/14.html
Posted by Who are They? at 3:22 AM0comments
Posted by Who are They? at 3:11 AM0comments
ဖန်တီးသူ Kyaw Swa Linn Head of Foreign Affairs Bu...